Lisakhokhela Iqembu leFC Platinum kuPSL
Mabasa 22, 2013
BULAWAYO — Lisakhokhela iqembu lenguqu ele FC Platinum engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu ese PSL loba nje linqotshwe okwakuqala kemidlalweni yalonyaka ngempelaviki edluleyo.
Iqembu leShabanie Mine ebeleqhuba nzima emidlalweni yakuqala yesizini lithe ngokuphenduka komqeqetshi walo uLuke Masomere, yena owayemiswe ukuphatheka kwezomdlalo wenguqu ngemva kokutholakala elecala lokuba ngomunye owaphatheka ekuthengisweni kwemidlalo yeqembu lama Warriors ezwekazi lase Asia, linqobe okwakuqala lonyaka lapho litshaya ele FC Platinum nge 1 ka nya emdlalweni obusenkundleni ye Maglas.
Limpumela idale ukuba iShabani isuke emsileni wengalane yemiklomelo njengoba isilemiklomelo emine kuthi iqembu le Hwange yilo eselijeke amanye amaqembu ngaphansi kwengalane njengoba kuyilo lodwa elisele lilemiklomelo emithathu ngemva kwemidlalo ebikhona ngempelaviki.
Phezu kwengalane IFC Platinum iyale ilokhu ilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngemva kwayo kule Highlanders kanye le Black Mambas zona ezilemiklomelo elitshumi ngayinye.
Amaqembu athi Chicken Inn lele How Mine ayale elemiklomelo eyisikhombisa ngemva kokunqotshwa idlala isekhaya.
Sikhangele umdlalo kakhilikithi:-
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe ele Bangladesh ngama runs ayi 335 emdlalweni wakuqala owohlobo lwe Test odlalelwe esigodlweni eHarare ngeviki edluleyo.Lawa maqembu azadibana emdlalweni wesibili owe Test ngolweSithathu njalo lumdlalo uzakuba senkundleni yeHarare Sports Club njalo.
Kuzakuthi ekuqaleni kwenyanga ka Nkwenkwezi lawa maqembu adibane emidlalweni eyohlobo lwe One Day International emithathu ezadlalelwa edolobheni lako Bulawayo ecine ngemidlalo ye twenty20 emibili layo ezadlalelwa ko Bulawayo enkundleni ye Queens Sports Club.